Global Voices teny Malagasy » Ny Fiainan’ny Mpiasa Mpifindra Monina Ao ‘Little Burma’ Ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jolay 2016 15:32 GMT 1	 · Mpanoratra The Irrawaddy Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Thailandy, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Sendikà, Tanora, Toekarena sy Fandraharahàna, Vehivavy sy Miralenta
Mpiasa mpifindra monina nalaina sary tao amin'ny toeram-panorenana ao Mahachai, Samut Sakhon, Thailandy. (Sary: JPaing / The Irrawaddy)
Avy amin'ny The Irrawaddy, tranokalam-baovao tsy miankina ao Myanmar ity lahatsoratr'i  Nyein Nyein ity ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mety hahatsiaro ho toy ny any amin'ny tanàna lehibe indrindra ao Myanmar antsoina hoe Yangon ireo vahiny rehefa mirenireny ao Samut Sakhon izay ao atsimo-andrefana kely miala eo Bangkok ka mahita ireo olona manao sarong akanjo nentim-paharazana antsoina hoe longyi na tamein rehefa miresaka ireo Birmana fa tsy toy ny ao an-tanàna Thailandey.
Ny alahady ihany no andro hialana sasatra isan-kerinandro ho an'ireo Birmana maro mpifindra monina ao Thailandy -fotoana iray hakana aina sy hialantsasatra fohy avy amin'ny asa mafy; fa tsy misy kosa ny andro fitsaharana ho an'ireo mpiasa hafa an'arivony mpikarama isan'andro.
Matetika atosiky ny fanantenana ny hahazo karama tsara kokoa ireo izay mifindra monina ho ao amin'ny faritra. Fantara avy lavitra ho toy ny toeram-pivelomana azo antoka i Samut Sakhon noho ny karama betsaka kokoa noho ny ao Bangkok , kanefa mbola malaza ratsy ny karama kely sy ny fomba fanararaotan'ny orinasan'ny jono misy ao amin'ny faritany.
Fantatry ny ao an-toerana amin'ny anarana hoe Mahachai, fa antsoin'ireo vahiny kosa hoe “Little Burma” (fantatra amin'ny anarana hoe Burma i Myanmar taloha), mandray mpifindra monina Birmana eo anelanelan'ny 300.000 sy 400.000 ny seranan-tsambo ao an-tanànan'i Samut Sakhon izay miasa ao amin'ny orinasa sy fanjonoana manodidina ny 6.000 .
Avy any amin'ny faritr'i Tenasserim ao Myanmar i Ma Thein Win , ary efa niaina tao Thailandy nandritra ny dimy taona izy. Niasa tao Bangkok izy teo aloha , fa nifindra tany Samut Sakhon izy tamin'ny volana Aprily nanantena ny hampitombo ny vola miditra aminy amin'ny asa fanorenan-trano .
Maniry ny hiverina any an-tanàny any amin'ny distrikan'ny Dawei ilay renim-pianakaviana 45 taona manan-janaka efatra.
“Kanefa tsy misy trano sady tsy manam-bola izahay ; ahoana no fomba hiverenana sy hivelomanay any? ” hoy i Thein Win nanontany moramora sady nandroaka ny antontan-kitay teo akaikin'ny toeram-panorenana, izay misy lehilahy miasa eny an- tampon'ny trano mbola tsy vita.
Maro ireo fiaraha-monina mpifindra monina ao Thailandy niresaka tamin'ny The Irrawaddy fa raha misy ny asa tsara karama any an-tanindrazany dia handeha hiverina any Myanmar izy ireo , noho ny hoe hitady asa any amin'ny firenen-kafa mba hiavotan-tena.
Mpiasa mpifindra monina nalaina sary miasa amin'ny Talaat Kung tsenan'ny patsabe ao Mahachai, Samut Sakhon, Thailand. (Sary: JPaing / The Irrawaddy)
‘Manana faharetana foana izahay’
Sambany  nitsidika an'i Thailandy sy Mahachai ny mpitarika ny antoko mpanohitra Aung San Suu Kyi ao Myanmar tamin'ny 2012 . Fanindroany tamin'ny fitsidihany  kosa ity taona ity tamin'ny volana Jona ary amin'ny maha mpanolo-tsaina ara-panjakana azy tamin'ity indray mitoraka ity no nanaovany izany rehefa nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny Novambra 2015 tamin'ny fandresena goavana ny antokony. Nihaona tamin'ny mpifindra-monina vitsivitsy monja ao Mahachai i Suu Kyi nandritra izany diany vao haingana  izany , taorian'ny fanakanana nataon'ny manam-pahefana Thailandey ny fidiran'ity mpitarika mpiaro ny vondron'ny zon'ny mpiasa ao Myanmar sy ireo vahoaka teratany Birmana maro teo am-piandrasana azy ity.
Iray amin'ireo mpifindra monina maro tsy afaka ny hanatrika ny kabarin'i Suu Kyi amin'ireo mpiasa Birmana ao Thailandy i Thein Win. Nampitomany azy ny nieritreritra ny fitsidihan'i ilay Madama , izay nolazaina fa “fihetseham-po mifangaro ” izany. Mbola nanantena i Thein Win fa hiasa mba “hitondra fiovana tsara” amin'ny fiainany i Suu Kyi.
Lasa be fihetseham-po ihany koa ireo mpiasa Birmana ao Talaat Kung, na ny tsenan'ny patsabe, rehefa miresaka momba ny fitsidihan'ilay mpanolotsainam-panjakana sy ny fanantenan'izy ireo hisian'ny asa tsara kokoa , izay nankatoavin'i  Suu Kyi nandritra ny fitsidihana tao Thailandy. Tsy araka ny tokony ho izy ny karaman'izy ireo matetika izay manomboka amin'ny 200 baht Thailandey (5,72 $ Amerikana) ka hatramin'ny 300 baht (8.58 $ ) ,karama farany ambany ofisialy isan'andro ao Thailandy ilay farany io, nefa izany no matetika omena ireo mpiasa vahiny mpifindra monina .
Nilaza tamin'ny The Irrawaddy i Aye Myat Mon sady manavaka ireo patsabe eo amin'ny latabatra fa mahazo ny karama Thailandey farany ambany isan'andro izy amin'ny asa mandritra ny valo ora , kanefa miovaova arakaraka ny fotoana fisian'ny patsabe na hazandranomasina hafa ny asa . Milaza ho 18 taona izy anefa toa tanora kokoa, efa efa-taona izay no nahatongavan'i Aye Myat Mon tao Thailandy niala avy any Moulmein, Fanjakana Mon, ary miara-mipetraka amin'ny rahavaviny izy, ireo ray aman-dreniny sisa no tavela any an-tranony any atsimo atsinanan'i Myanmar.
Tsy azo antoka loatra ny fiarovana rehefa mitantara momba ny fepetran'ny asa ao Mahachai; maro amin'ireo olona miasa ao amin'ny orinasan'ny hazandranomasina no tsy sahy manao fitarainana any amin'ny mpanao gazety.
Tsy sahy misarika ireo fampahalalam-baovao mikasika ny seranan-tsambon'ny faritra, ny tsena na ny toeram-panorenana ireo mpampiasa Thailandey; nilaza tamin'ny The Irrawaddy ireo mpiasa fa matahotra izy ireo ny ho voaroaka aty aoriana raha fantatra fa nandray anjara tamin'ny fitantarana momba ny tantaran'ny Little Burma.
“Mila manam-paharetana izahay satria miasa aty amin'ny firenen-kafa, araka ny voalazan'i Amay Suu [Renim-pianakaviana]:” hoy i Ye Min mpiasa ao Kung Talaat tamin'ny The Irrawaddy talohan'ny nahatongavan'ny lehibeny iray ary nifarana teo ny antsafa nifanaovana taminy.
Mpiasa mpifindra monina nalaina sary miasa ao Talaat Kung tsenan'ny patsabe ao Mahachai, Samut Sakhon, Thailandy. (Sary: JPaing / The Irrawaddy)
Nizara tantara momba ny tahotra polisy Thailandey manara-maso akaiky, amin'ny alàlan'ny fisavana, ny antontan-taratasy momba azy ireo sy ny taratasy maha-mpiasa azy ihany koa ireo mpiasa raha toa ka manana fahazoan-dalana miasa ara-dalàna ao amin'ny firenena izy ireo na tsia.
“Mangataka vola ny polisy hanaovany fanampiny rehefa miahiahy ny antontan-taratasinay ho [ tsy ampy],” hoy ny lehilahy iray miasa ao amin'ny tsenan'ny patsabe, tamin'ny feo sady sempotra no tsy te hanonona anarana.
Tombanana ho eo anelanelan'ny 3 ka hatramin'ny 4 tapitrisa ny isan'ny mpiasa mpifindra monina ao Thailandy, kanefa ny antsasany latsaka no voasoratra anarana ofisialy. Napetraka ny politika samihafa mba hanampiana ireo mpiasa avy any Myanmar hahazo taratasy ara-dalàna, indrindra fa rehefa lany andro ny taratasiny . Anisan'izany ny fisoratana anarana amin'ny ” karatra mavokely,” na ny fahazoan-dalana hiasa izay afaka henjehina rehefa tapitra ny visa efa-taona.
“Matetika ireo mpiasa mpifindra monina no tratran'ny fanararaotana na dia efa manana taratasy aza izy ireo,” hoy Sai Sai, mpikambana ao amin'ny Tambajotran'ny Mpandala ny Zon'ny Mpiasa Mpifindra Monina, fikambanana iray manampy ny mpifindra monina avy any Myanmar ao Thailandy.
Nanazava i Sai Sai fa mety avy amin'ny tsy fahaizan'ireo mpiasa miteny ny teny Thailandey no mahatonga ireo manampahefana miahiahy ary mety hitarika hatrany amin'ny fisamborana satria ahiahiana ho mandray zava-mahadomelina, na miampita eo amin'ny faritany ao Thailandy, tsy manamora ny fahafahana mivezivezy “ny karatra mavokely” fa mamela fotsiny ihany ireo mpiasa mpifindra monina mba hijanona ao amin'ny faritra ao amin'ny firenena izay nanoratana anarana ny taratasiny .
Araka ny tatitry ny Bangkok Post, nahemotra hatramin'ny 29 Jolay ny fe-potoana fisoratana anarana hahazoan'ny mpifindra monina fahazoan-dalana hiasa, nilaza ireo manam-pahefana fa tsy hisy ny famindram-po aorian'izay. Heverina kosa ny hisian'ny fanenjehana fanampiny – ho an'ireo izay mbola sarotra ny famenoana ny fisoratana anarana ao Samut Sakhon sy manerana an'i Thailandy.
Mpiasa mpifindra monina nalaina sary miasa ao Talaat Kung tsenan'ny patsabe ao Mahachai, Samut Sakhon, Thailand. (Sary: JPaing / The Irrawaddy)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/24/85568/
 Fanindroany tamin'ny fitsidihany: http://www.irrawaddy.com/burma/thousands-of-burmese-migrants-unable-to-meet-with-suu-kyi.html